ओखलढुंगामा ह्वात्तै बढ्यो आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या | CHALKHEL.COM
Home जीवनशैली/स्वास्थ्य ओखलढुंगामा ह्वात्तै बढ्यो आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या
ओखलढुंगामा ह्वात्तै बढ्यो आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या
ओखलढुंगा २५ पुस । जिल्लामा पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भएको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच बर्षको अवधिमा १ सय४८ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढि एकसय जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । आत्महत्या गर्नेमा १२ देखी ३० बर्ष उमेर समुहका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरीक्षक टिका कार्कीले बताए ।
मानिस किन आत्महत्या गर्ने मोडमा पुग्छ ?
जिल्लामा आत्महत्याका घटना बढ्नुमा सामाजिक एकीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने समाजशास्त्री दिपेश घिमिरले बताउँछन् । ‘आत्महत्या मनोवैज्ञानिक हर्मोनले नभई,सामाजिक प्रभावका कारण हुने गर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिको परिवारसँगको सम्बन्ध र समुदायको वातावरणले प्रभाव पार्ने हुन्छ’ उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
आत्महत्या विशेषगरी गाउँमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी मात्रामा हुने गरेको उनको बुझाई छ । ‘सहरमा गाउँमाभन्दा परिवारिक बन्धन कम हुन्छ, यसले आत्महत्या बढाउछ ’ घिमिरेले भने । विशेषत परिवार बीचको बन्धनमा एकता नहुँदा आत्महत्या बढ्ने गरेको समाजशास्त्री घिमिरेको भनाई छ ।
बढ्दो आत्महत्याको प्रवृत्तिलाई कसरी रोक्ने ?
आत्महत्यालाई रोक्न सामाजिक रुपमा ऐक्यबद्धता बढाउन जरुरत रहेको घिमिरेको दाबी छ । उनको भनाईमा यसलाई शिक्षाका माध्यमबाट कम गर्न सकिन्छ । बेला–बेलामा समुदायमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुले पनि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले पहिलेनै केही लक्षणहरु देखाउने गरेको उनको भनाई छ । घिमिरे भन्छन् ‘आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले विस्तारै परिवारसँगको घुलमिल कम गर्ने गर्छन् ।’ यस्तो अवस्थामा उनीहरुसँग घुलमिल भै बिशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको बुझार्ई छ ।रातोपाटी
Previous articleबालकोटमा सुरु भो एकता संयाेजन समितिकाे बैठक
Next articleडा.केसीलाई तत्काल रिहाई गर: जनमोर्चा